नेपाली क्रिकेटरको रोकिएको तलब निकासा, हेर्नुस् कुन खेलाडीले कति रकम पाउँदै ? - Everest Dainik - News from Nepal
नेपाली क्रिकेटरको रोकिएको तलब निकासा, हेर्नुस् कुन खेलाडीले कति रकम पाउँदै ?
काठमाडौं, माघ २६ । लामो समयदेखि रोकिएको नेपाली क्रिकेट खेलाडीको मासिक तलब आईसीसीले निकासा गरेको छ ।
सन् २०१६ देखि रोकिएको तलबबापतको रकम आईसीसीले आज राखेपको खाता रहेको स्टाण्डर्ड चार्टड बैंकमा एकमुष्ट १ करोड २७ लाख ८७ हजार ७ सय ८२ रुपैयाँ पठाएको हो ।
२०१६ देखि नेपाल क्रिकेट संघ क्यान निलम्बनमा परेपछि रोकिएको नेपाली खेलाडीहरुले पछिल्लो समय तलब पाउन सकेका छैनन् । क्यान निलम्बनमा परेपछि प्रत्यक्ष रुपमा आईसीसीले नेपाली क्रिकेटको रेखदेख गर्दै आएको छ ।
याे पनि पढ्नुस प्रचण्ड भन्छन्, ‘क्रिकेट खेलाडीले विश्वमा नेपालको इज्जत बढाए’
सी श्रेणीमा सुवास खकुरेल, सागर पुन, दिलिपनाथ, सुनील धमला, सुशन भारी, किशोर महतो र विनोद भण्डारी रहेका छन् ।खेलाडीहरुको तलब निकासा भएकाले अबको एक दुई दिनमा वितरण गरिने पनि राखेपले जनाएको छ ।
‘ए’ श्रेणीका खेलाडीले मासिक ३५ हजार रुपैयाँ, ‘बी’ श्रेणीका खेलाडीले मासिक २५ हजार रुपैयाँ र सी श्रेणीका खेलाडीले मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले पछिल्लो दुई वर्षको तलब पाउनेछन् ।
याे पनि पढ्नुस वर्षाका कारण नेपाल र सिंगापुरबीचको खेल रोकियो [अपडेट]